विचार/ब्लग « Dhankuta Khabar
ओमप्रकाश निरौला । नेपालमा समाजवादी ब्यवस्थाका केही आधारभूत मान्यताहरु स्थापित गर्नका लागि कोरोनाले सृजना गरेको परिस्थिति एउटा सुनौलो अवसर हुन सक्दछ । अहिले कोरोनाका कारणले मानिसहरुलाई घरबाट बाहिर निस्कन प्र,तिबन्धित
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) सं,क्रमण हुन नदिन सरकारले ९ दिनदेखि ल,कडाउन लगाएको छ । हालसम्मको निर्णयअनुसार लकडाउन चैत २५ सम्म रहनेछ । नेपालमा हालसम्म पाँच जना सं,क्रमण देखिएको छ
ओम प्रकाश निरौला । कोरोनाको महामा,रीसगै यो रोग बाट ब,च्न नेपाल सरकारले सबै नागरिकलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घरमै बस्ने आग्रह तथा निर्देशन दिएको छ । अन्तराष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानहरु बन्द
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार । प्रथमतः देशसेवालाई नै आफ्नो स्वास्थ्य ठान्ने तपाईंको सफलता र दीर्घायुको कामना गर्दछु । आज तपाईंमाथि चारैतिरबाट आ,क्रमण भइरहेको बुझिन्छ । तपाईंको यो अवस्था देख्ता मलाई पुराणको
-राधा पोखरेल सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, नमस्कार ! तपाई माथी मेरा केही असन्तुष्टि र आशंकाहरू छन् । सायद यो मेरो मात्र होइन, अधिकांश नेपालीहरूको असन्तुष्टि र आशंका हो त्यसैले आज
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चरमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड डिमान्ड गरेको अडियो सार्बजनिक भएसँगै मन्त्रीको चौतर्फी विरोध भएको छ । समाचार बाहिरिएसँगै कलाकार दीपकराज गिरीले सांकेतिक रुपमा व्य,ङग्य गरेका
प्रम ज्यू, प्रेम सञ्जेललाई अ ख्तियार प्रमुख बनाइयोस
तोयानाथ उपेक्षित : अतित धेरै पुरानो छैन, त्यस्तै तीन दशक मात्र अघिको कुरा हो । मेरो साईनो हालका प्रधानमन्त्रीसँग म आफु कनिष्ट पात्र हुँदाहुँदै पनि घनिष्ट थियो । पहिलो पटकको
ग रिबलाई स हयोग गर्नु नै धनी हुनु हो – बिल गेट्सको चर्चित भनाइहरु
एजेन्सी । बिल गेट्स त्यो नाम हो जब हामी कम्प्युटरको बारे सोच्छौं तव उनलाई सम्झिन्छौ। उनलाई कम्प्युटरको पिता मानिन्छ। उनी माइक्रोसफ्ट, विश्वको सब भन्दा ठूलो कम्प्यूटर सफ्टवेयर कम्पनीको मालिक हुन ।
डा. प्रेमसिंह बस्न्यात, केही मित्रहरुले मलाई अमेरिकि एमसिसिबाट कती पैसा खाइस र चुप लागेर बसिस भन्ने प्रश्न राख्नु भयो पनि। म कातिक २९ गते बाट माघ १ गते सम्मा देस